အသားအရေကို တမြည့်မြည့်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ ရဲ့အန္တရာယ် - For her Myanmar
အသားအရေကို တမြည့်မြည့်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ ရဲ့အန္တရာယ်
အခုတလော အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ Selfie ဓာတ်ပုံက Sunkiss Skin လို့ခေါ်တဲ့ နေရောင်က မျက်နှာပေါ်ဖြာကျနေတဲ့အချိန် ဝင်းမွတ်နေတဲ့ အသားအရေကို အမိအရရိုက်ထားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ရန်သူတော်စစ်စစ်ကို ဒီလိုယုံမှတ်ပြီး ပုံအပ်နေကြတာက တကယ့်ပြဿနာ။ ဟင် ဒီလိုနေရောင်လေးက ဘာများလုပ်နိုင်မှာမို့လို့လဲဆိုရင်တော့ ဒီပိုစ့်ကို အဆုံးထိသာဖတ်လိုက်ပါတော့လို့။ (ဖတ်ရင်းနဲ့ အသည်းကွဲပြီး မငိုကြေးနော်။)
နှင်းတို့နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေကျ နေရောင်ထဲမှာ UVA, UVB နဲ့ UVC လို့ခေါ်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ ရှိပါတယ်။ အိုဇုန်းလွှာပေါက်ပြဲပျက်စီးချိန်ကစပြီး အဲဒီခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေက နေရောင်နဲ့အတူပါလာတာမို့ လူ့အရေပြားပေါ် တိုက်ရိုက်ကျရောက်လာပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် နှင်းတို့ရဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ အလွှာ ၃ လွှာအကြောင်းကိုလည်း မပါမနေထည့်ပြောမှရမယ်ထင်ပါတယ်။ အရေပြား ၃ လွှာထဲမှာဆိုရင် Epidermis (အပေါ်ဆုံးအလွှာ)၊ Dermis (အလယ်အလွှာ) နဲ့ Hypodermis (အောက်ဆုံးအလွှာ) ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ (အပြည့်အစုံကိုတော့ နောက်တစ်ပုဒ်မှာ မျှော်ပါရှင် :P)
Related Article >>> ဝက်ခြံတွေကို သဘာဝဆန်ဆန်မိတ်ကပ်လေးနဲ့ပဲ ဘယ်လိုဆရာကျကျ ဖျောက်ကြမလဲ?
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်င်္တေထဲမှာ အရှည်ဆုံးကတော့ UVA rays တွေပါ။ နှင်းတို့အရေပြားရဲ့ ဒုတိယအလွှာဖြစ်တဲ့ Epidermis အထိဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ကော်လဂျင်၊ အလက်စတင်နဲ့ ချွေး၊ အဆီဂလင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး အဆီအရမ်းပြန်တာ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အရေးအကြောင်း၊ တင်းတိပ်အကွက်တွေ ဖြစ်လာတာမျိုး ၊ မျက်နှာမှာ ချွေးပေါက်ကျယ်ပြီး လိမ္မော်ခွံလိုအသားအရေဖြစ်လာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
UVB rays တွေကတော့ အလယ်အလတ်လှိုင်းလေးပါ။ သူကတော့ နှင်းတို့အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရောက်လာနိုင်ပြီး အဲဒီအပေါ်ဆုံးအလွှာမှာရှိတဲ့ Mellanocyte ဆဲလ် (မယ်လနင်ဆဲလ်) တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ကာ မဲလ်နင်ထွက်နှုန်းကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပါတယ်။ (အခု နိုင်ငံခြားသူတွေ ညိုချင်လို့ နေလောင်ဒဏ်ခံကြတာလေ။ အဲဒါသူတို့က မဲလ်လနင်ဓာတ်အထွက်နည်းလို့များအောင် နေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိခိုင်းထားတာပါ။ ပြီးတော့ တချို့အာရှသူလေးတွေ အသားဖြူချင်လို့ အသားဖြူဆေးတွေသောက် ၊ ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာက ရှိပြီးသားမယ်လ်လနင်ဓာတ်ကို လျှော့ချပစ်တာမို့ နှစ်နည်းလုံးအန္တရာယ်ရှိပါတယ်နော်။)
နောက်ဆုံး UVC ရောင်ခြည်ကတော့ အားလုံးထဲမှာ အတိုဆုံးပါ။ ဒီရောင်ခြည်ကိုတော့ အိုဇုန်းလွှာကကာထားတာမို့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မရောက်လာနိုင်သေးပေမဲ့ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိ လူ့အသားအရေကို ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> မျက်တောင်အတုဆက်တာနဲ့ ရိုးရိုးမျက်တောင်အတုတပ်တာမှာ ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်သင့်လဲ?
ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကြောက်တယ်ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပဲထားကြတော့မှာလား? ပြဿနာရှိရင် အဖြေကတော့ရှိစမြဲမို့ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတော့ရှိပါတယ်။ ယောင်းတို့အရင်က အပိုလို့ထင်ကောင်းထင်မယ့် နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ခရင်မ်တွေကို ထုတ်လိမ်းပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ SPF45 နဲ့ PA+++ အနည်းဆုံးပါတဲ့ sunscreen တွေနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာမို့ တွေ့ကရာတော့ ကောက်မလိမ်းကြပါနဲ့ ယောင်းတို့ရေ။ နောက်ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း အသားခြောက်သူတွေနဲ့ ပုံမှန်အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ခရင်မ်အမျိုးအစားရွေးပြီး အဆီပြန်သူတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်အသားအရေပိုင်ရှင်လေးတွေကတော့ အသားထဲကိုစိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ ဂျယ်လ်အမျိုးအစား (သို့) ခပ်ပေါ့ပေါ့ခရင်မ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ယောင်းတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ အရေပြားပြဿနာလေးတွေ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်နော်။
အခုတလော အရမျးခတျေစားနတေဲ့ Selfie ဓာတျပုံက Sunkiss Skin လို့ချေါတဲ့ နရေောငျက မကျြနှာပျေါဖွာကနြတေဲ့အခြိနျ ဝငျးမှတျနတေဲ့ အသားအရကေို အမိအရရိုကျထားတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့ရနျသူတျောစဈစဈကို ဒီလိုယုံမှတျပွီး ပုံအပျနကွေတာက တကယျ့ပွဿနာ။ ဟငျ ဒီလိုနရေောငျလေးက ဘာမြားလုပျနိုငျမှာမို့လို့လဲဆိုရငျတော့ ဒီပိုဈ့ကို အဆုံးထိသာဖတျလိုကျပါတော့လို့။ (ဖတျရငျးနဲ့ အသညျးကှဲပွီး မငိုကွေးနျော။)
နှငျးတို့နတေို့ငျး ထိတှနေ့ကြေ နရေောငျထဲမှာ UVA, UVB နဲ့ UVC လို့ချေါတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျတှေ ရှိပါတယျ။ အိုဇုနျးလှာပေါကျပွဲပကျြစီးခြိနျကစပွီး အဲဒီခရမျးလှနျရောငျခွညျတှကေ နရေောငျနဲ့အတူပါလာတာမို့ လူ့အရပွေားပျေါ တိုကျရိုကျကရြောကျလာပါတယျ။ ခရမျးလှနျရောငျခွညျတှအေကွောငျး ပွောမယျဆိုရငျ နှငျးတို့ရဲ့ အရပွေားမှာရှိတဲ့ အလှာ ၃ လှာအကွောငျးကိုလညျး မပါမနထေညျ့ပွောမှရမယျထငျပါတယျ။ အရပွေား ၃ လှာထဲမှာဆိုရငျ Epidermis (အပျေါဆုံးအလှာ)၊ Dermis (အလယျအလှာ) နဲ့ Hypodermis (အောကျဆုံးအလှာ) ဆိုပွီး ၃ မြိုးရှိပါတယျ။ (အပွညျ့အစုံကိုတော့ နောကျတဈပုဒျမှာ မြှျောပါရှငျ :P)
Related Article >>> ဝကျခွံတှကေို သဘာဝဆနျဆနျမိတျကပျလေးနဲ့ပဲ ဘယျလိုဆရာကကြ ဖြောကျကွမလဲ?
UVA rays တှကေတော့ အားလုံးထဲမှာ အရှညျဆုံးခရမျးလှနျရောငျခွညျပါ။ သူက နှငျးတို့အရပွေားရဲ့ ဒုတိယအလှာဖွဈတဲ့ Epidermis အထိဝငျရောကျနိုငျပွီး ကျောလဂငျြ၊ အလကျစတငျနဲ့ ခြှေး၊ အဆီဂလငျးတှကေို ဖကျြဆီးပဈပွီး အဆီအရမျးပွနျတာ၊ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အရေးအကွောငျး၊ တငျးတိပျအကှကျတှေ ဖွဈလာတာမြိုး ၊ မကျြနှာမှာ ခြှေးပေါကျကယျြပွီး လိမ်မျောခှံလိုအသားအရဖွေဈလာတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
UVB rays တှကေတော့ အလယျအလတျလှိုငျးလေးပါ။ သူကတော့ နှငျးတို့အရပွေားရဲ့ အပျေါဆုံးအလှာကိုရောကျလာနိုငျပွီး အဲဒီအပျေါဆုံးအလှာမှာရှိတဲ့ Mellanocyte ဆဲလျ (မယျလနငျဆဲလျ) တှကေို ဖကျြဆီးပဈကာ မဲလျကနငျထှကျနှုနျးကို ကမောကျကမဖွဈစပေါတယျ။ (အခု နိုငျငံခွားသူတှေ ညိုခငျြလို့ နလေောငျဒဏျခံကွတာလေ။ အဲဒါသူတို့က မဲလျလနငျဓာတျအထှကျနညျးလို့မြားအောငျ နနေဲ့တိုကျရိုကျထိခိုငျးထားတာပါ။ ပွီးတော့ တခြို့အာရှသူလေးတှေ အသားဖွူခငျြလို့ အသားဖွူဆေးတှသေောကျ ၊ ဆေးထိုးတယျဆိုတာက ရှိပွီးသားမယျလျလနငျဓာတျကို လြှော့ခပြဈတာမို့ နှဈနညျးလုံးအန်တရာယျရှိပါတယျနျော။) နောကျဆုံး UVC ရောငျခွညျကတော့ အားလုံးထဲမှာ အတိုဆုံးပါ။ ဒီရောငျခွညျကိုတော့ အိုဇုနျးလှာကကာထားတာမို့ ကမ်ဘာမွပေျေါမရောကျလာနိုငျသေးပမေဲ့ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ အရပွေားကငျဆာဖွဈတဲ့အထိ လူ့အသားအရကေို ထိခိုကျစပေါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> မကျြတောငျအတုဆကျတာနဲ့ ရိုးရိုးမကျြတောငျအတုတပျတာမှာ ဘယျဟာကိုရှေးခယျြသငျ့လဲ?
ဒီလောကျအန်တရာယျမြားတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျကို ကွောကျတယျဆိုပွီး ဒီအတိုငျးပဲထားကွတော့မှာလား? ပွဿနာရှိရငျ အဖွကေတော့ရှိစမွဲမို့ ကာကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတော့ရှိပါတယျ။ ယောငျးတို့အရငျက အပိုလို့ထငျကောငျးထငျမယျ့ နလေောငျဒဏျကာကှယျတဲ့ခရငျမျတှကေို ထုတျလိမျးပါ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနအေရ SPF45 နဲ့ PA+++ အနညျးဆုံးပါတဲ့ sunscreen တှနေဲ့မှ အဆငျပွမှောမို့ တှကေ့ရာတော့ ကောကျမလိမျးကွပါနဲ့ ယောငျးတို့ရေ။ နောကျပွီးတော့ ထုံးစံအတိုငျး အသားခွောကျသူတှနေဲ့ ပုံမှနျအသားအရေ ပိုငျရှငျတှကေတော့ ခရငျမျအမြိုးအစားရှေးပွီး အဆီပွနျသူတှနေဲ့ ပေါငျးစပျအသားအရပေိုငျရှငျလေးတှကေတော့ အသားထဲကိုစိမျ့ဝငျနိုငျတဲ့ ဂယျြလျအမြိုးအစား (သို့) ခပျပေါ့ပေါ့ခရငျမျအမြိုးအစားကို ရှေးခယျြအသုံးပွုပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ယောငျးတို့အခုဖွဈနတေဲ့ အရပွေားပွဿနာလေးတှေ သကျသာသှားပါလိမျ့မယျနျော။
Tags: Dangers, kiss, rays, skin, sun, ultraviolet
ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ ရှောင်ရမယ့်အချက် (၆) ချက်
Hnin Ei Oo April 1, 2019